Welcome to Raj Shrestha's Personal WEB Log 2: ठूला मिडियामा किन अटेन काष्ठमण्डप ?
ठूला मिडियामा किन अटेन काष्ठमण्डप ?
गंगा बहादुर नेम्कुल
Source : http://www.onlinechautari.com/2015/06/52086
Replicate of Kashthamandap
आज हामीले काठमाडौं भनेर चिनिदै आएको शहर काठमाडौं, जुन सहरको नाम काष्ठमाडप मन्दिरको देन हो । जुन शहरमा ८ सय ८८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सम्पदा तथा स्मारक रहेको तथ्यांक छ । भुइँचालोले काठमाडौंको हनुमानढोका दरबार क्षेत्रलाई भने धेरै नै नोक्सान पुर्याएको देखिन्छ । त्यहाँ लगभग ९० प्रतिशत सम्पदा पूर्णरूपमा क्षति भएको छ ।
बैशाख १२ को भुइँचालो यसकारणले पनि ‘महाभूकम्प’ सरह ठहरियो कि यसले देशका अधिकांश सांस्कृतिक सम्पदा विनाश गरिदियो । विनाशकारी भुइँचालोले गरेको सम्पूर्ण भौतिक विनाशमा सांस्कृतिक सम्पदाको अंश १० प्रतिशत पनि छैन होला तर यो नै त्यो महत्वपूर्ण अंश हो, जसले मुलुकलाई तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय संवेदनाको केन्द्रमा ल्याइदियो ।
प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएअनुसार यो भुइँचालोले उपत्यकाभित्र मात्र कुल ३ सय २७ सम्पदामा क्षति पुगेको छ तर यो उपत्यकामा सूचीकृत सम्पूर्ण सम्पदाको ५० प्रतिशत पनि होइन ।
सम्पदा क्षेत्रमा भएको यो विशाल क्षतिपछि राज्य, सर्वसाधारण र यहाँसम्म कि मिडियाको समेत पूर्ण ध्यान धरहरामा गएर अडेको देख्दा भने उपत्यकावासीको मनमा अर्को पराकम्प गएको छ । यसले हाम्रो ‘सम्पदा चेत’ को दायरालाई पनि प्रष्ट्याइदिएको छ । भर्खर दुई सय वर्ष इतिहास बोकेको धरहरा नेपालको मौलिक सम्पदासमेत नभएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । भुइँचालोले धरहराभन्दा पुराना, धरहराभन्दा महत्वपूर्ण र धरहराभन्दा ऐतिहासिक अरू धेरै सम्पदा ध्वस्त पारेको छ तर पनि हाम्रो ध्यान अझै पनि केवल धरहरामा किन केन्द्रित छ ? ठूला व्यापारी तथा सेलिब्रिटी धरहरा बनाउन जनता लाग्नुपर्ने बताइरहेका छन् । केही बैंकर धरहरामा ‘लगानी’ गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् । मिडिया धरहराको भग्नावशेषलाई ‘भूकम्प सिम्बोल’ बनाइरहेका छन् । आखिर किन ?
राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले नेपालको सातवटा सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीमा राखेको छ । त्यो सातवटामा धरहरा पर्दैन । योबाहेक अर्को १५ वटा महत्वपूर्ण स्थललाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको छ । त्यो १५ वटामा पनि धरहरा पर्दैन ।
पर्यटन नेपालका लागि विदेशी मुद्राआर्जन गर्ने सबैभन्दा ठूलो उद्योग हो तर नेपालमा आजसम्म एउटै पनि त्यस्तो पर्यटक आएको छैन होला, जसको मूल उद्देश्य काठमाडौंको धरहरा हेर्नु हो । यति हुँदाहुँदै पनि विश्वभरि किन धरहरालाई नै भुइँचालोको प्रतीक बनाएर प्रचार गरियो ? जुन स्मारक अस्तित्वमा हुँदा त देशका लागि कुनै कामको विषय थिएन भने आज अस्तित्वविहीन भइसकेपछि के कामलाग्दो होला र ?
देशका सबैजसो राष्ट्रिय दैनिकले भुइँचालोको प्रतीक झल्काउनुप¥यो कि धरहरालाई अघि सार्ने गरेको पाइन्छ । जेठ २६ गते राजधानीबाट प्रकाशित हुने दुई प्रमुख राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुर र नागरिकमा काठमाडौंको बबरमहलस्थित एउटा पर्खालमा लेखिँदै गरिएको एउटा चित्रको तस्बिर छापिएको थियो । दुवै पत्रिकाले क्याप्सनमा लेखे– लेखिँदै गरेको एउटा मन्दिरको चित्र । दुवै पत्रिकालाई थाहा थिएन कि त्यो कुनै मन्दिर होइन, काष्ठमण्डपको चित्र हो । कान्तिपुरको त लोगो नै काष्ठमण्डप हो, के उसलाई आफ्नै लोगोको समेत नाम थाहा थिएन ? जसले धरहरालाई ध्वस्त सांस्कृतिक सम्पदाको प्रतीक बनाए, उसलाई काष्ठमण्डपबारे थाहा छैन । कसरी भयो यस्तो ? के होला यसको कारण ?
काठमाडौंवासी त यसलाई ‘सांस्कृतिक पूर्वाग्रह’ ठान्छन् । मल्लकालीन सम्पदालाई छोडेर शाहकालीन सम्पदालाई महत्व दिने ‘महेन्द्रवादी’ सोचको निरन्तरता ठान्छन् यसलाई काष्ठमण्डपका रैथाने । यसका पछाडि एउटा विजित र अर्को विजयी देशको शासकीय मानसिकताले काम गरिरहेको आरोप पनि काठमाडौंवासीको छ । भलै यो आरोप यथार्थभन्दा पनि मनोवैज्ञानिक बढी होला तर यसमा पटक्कै सत्यता छैन पनि भन्न सकिन्न ।
आरोपका विभिन्न कोण होलान् तर काट्नै नसकिने एउटा सत्य के हो भने, धरहरा यसरी ध्वस्त सम्पदाको प्रतीक बन्न पुग्नुको पछाडि हाम्रो आफ्नै सांस्कृतिक चेतको कमी रहेको छ । यसभित्र कुनै षडयन्त्र वा सुनियोजित कामकुरो लुकेको छैन भने हामीले मान्नैपर्ने हुन्छ कि नेपाली जनतालाई सांस्कृतिक चेतना जगाउने काममा हामी अत्यन्त पछि परेकै हौं । राज्यका सबै निकाय र जनतामा समेत सांस्कृतिक चेतको ठूलो अभाव यसले प्रस्ट देखाएको छ । वास्तवमा यही सांस्कृतिक चेतको अभाव नै हो जसले गर्दा देशकै पहिचान भनिएका सम्पदा पनि ५६ सेकेन्डको एउटा झट्काले गल्र्यामगुर्लुम ढले ।
भुइँचालो आउँदा धरहरा ढल्नु त स्वाभाविक नै थियो किनकि त्यसको उचाइले नै उसलाई भुइँचालोको झट्का थेग्न दिँदैन । नब्बे सालमा पनि ढलेकै थियो, अहिले पनि ढल्यो, यो पुनःनिर्माण भयो भने अर्को भुइँचालोमा पनि त्यो ढल्छ नै । धरहरा काठमाडौंको ‘माटो सुहाउँदो’ संरचना होइन । न यो काठमाडौंको मौलिक वस्तु नै हो । पाँच तले घर बनाउन नहुने काठमाडौंको जमिनमा नौ तले धरहरा कसैले बनाउँछ भने उसले काठमाडौंलाई बुझेकै छैन भन्दा फरक नपर्ला । अस्वाभाविक उचाइका कारण धरहरा त ढल्यो तर त्यसको साथसाथै काठमाडौंका तीन चार तले होचा मन्दिर पनि ढले । किन ढले त ती ?
होचा मन्दिर ढल्नुको प्रमुख कारण थियो, त्यसलाई समयानुकूल जीर्णोद्धार नगरिनु । बेला–बेला जीर्णोद्धार गरिएका मन्दिर र सम्पदा ढलेनन् । जस्तो कि भक्तपुरको पचपन्न झ्याले दरबार, पाटनको दरबार, कृष्ण मन्दिर आदि । जति ढले जीर्णोद्धार नगरिएका सम्पदा ढले । अब प्रश्न उठ्छ, यी सम्पदाको जीर्णोद्धारचाहिँ किन भएन त ? किन यसमा काम भएन ? आउने उत्तर यही हो– धरहरा । जसले धरहरालाई नेपालको नम्बर एक सम्पदा ठान्ने गर्छन्, उसले यी मन्दिर जीर्णोद्धार पनि गर्नुपर्छ भनेर जान्नु पनि कसरी ? त्यो चेत कहाँ उनीहरूसँग ? धरहरालाई नेपालकै एकमात्र सम्पदा ठान्नुबाटै थाहा हुन्छ, उनीहरूको सांस्कृतिक चेतना नै अहिलेसम्म परिपक्व भइसकेको छैन । जो नेपालको पहिचान बोक्ने सम्पदा हो, जो नेपालको इतिहास बोल्ने सम्पदा हो, जो देशमा पर्यटक भित्र्याउने सम्पदा हो, ती सम्पदाको महत्व बुझ्ने चेतनाकै कमी हामीसँग रहेको देखियो ।
धरहरालाई जसले भुइँचालोको प्रतीक बनाए, उसले पनि धरहराको सांस्कृतिक महत्ताभन्दा पनि त्यसको उचाइ हेरेर यस्तो गरेको भान हुन्छ । धरहरा साँच्चै त्यति नै ठूलो सम्पदा हो भन्ने लागेको भए त्यहाँ सर्वसाधारणलाई चढ्न किन दिइयो ? पार्क र पोखरी सञ्चालन गरेजस्तै धरहरा सञ्चालन गर्ने ठेक्का किन व्यापारीलाई दिइयो ? राष्ट्रिय महत्वका सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्ने जिम्मा राष्ट्रको हो कि व्यापारीको ? रातो जति राम्रो भनेजस्तै अग्लो जति ठूलो भन्ने बालमनोविज्ञानमा आधारित भएर धरहरालाई भुइँचालोको प्रतीक बनाएको देखिन्छ ।
यसपालिको भुइँचालोले हामीलाई निहीत यो सांस्कृतिक चेतको कमीलाई पनि खुलस्तै उजागर गरिदिएको छ । सांस्कृतिक चेत भौतिक निर्माणका सन्दर्भमा मात्र होइन, आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदालाई चिन्ने सन्दर्भमा, आफूलाई चिन्ने सन्दर्भमा र आफ्नो मुलुकलाई चिन्ने सन्दर्भमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । अब गरिने पुनर्निर्माणमा सांस्कृतिक सम्पदाको मात्रै निर्माण होइन, यो सांस्कृतिक चेतको पनि निर्माण गर्नु जरूरी छ ।
Posted by raj shrestha at 10:15 AM